हेर्ने होइन निया शर्माको खतरनाक भिडियो ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
हेर्ने होइन निया शर्माको खतरनाक भिडियो ?
२०७६ असार २९ आइतवार
टिभीकी पपुलर अभिनेत्री निया शर्मा सानो पर्दाको साथ साथै सोसियल मिडियाम पनि धेरै पपुलर छिन् । उनी आफ्नो तश्वीर, भिडियो सोसियल मिडियामा शेर गरि रहन्छिन् । हालैमात्र उनी एउटा भिडियोलाई लिएर भाइरल भइरहेकी छिन् । नियाले गएको बिहिबार एउटा भिडियो सेर गरेकी थिइन् । जुन सोसियल मिडियामा धमाका मच्चाइरहेको छ ।
यो भिडियोको इन्स्टाग्राममा २४ घण्टा भित्र ६ लाख भन्दा बढीले यो भिडियो हेरेका थिए । भिडियोमा निया फायर पान खाई रहेकी देख्न सकिन्छ । केही दिन देखि निया मध्यप्रदेशको इन्दोरमा छुटी मनाईरहेकी छिन् । यही छुटी मनाउँने क्रममा उनले फायर पान खाइरहेको भिडियो बनाइन र तुरुन्तै भिडियोलाई भिडियोलाई इन्स्टाग्राममा सेयर गरिन् ।
भिडियोमा निया पान खान डराइराखेकी देख्न सकिन्छ । निया अरुले खाउ भनेकाले मात्रै उक्त फायर पान खाएको बताउँछिन् । नियाको यो भिडियो कतिपयलाई भने फिटिक्कै मन परेको छैन । जस-जसलाई नियाको उक्त भिडियो मन परेन, तिनीहरुले भन्दैछन् ‘निया चाहिने भन्दा बढि ओभर एक्टिङ गर्छिन् ।’
जंगबहादुर राणाका १० रोचक किस्सा
जंगबहादुर राणा ९१८७४–१९३३० प्रथम श्री ३ महाराज थिए । कोतपर्वको नरसंहार पश्चात नेपालको शासनमा उदाएका जंगबहादर भण्डारखाल पर्व पछि राजाभन्दा शक्तिशाली भए । उनको पालामा अंग्रेजसँगको लडाईंमा गुमेको मध्ये हालको बाँके, बर्दीया, कैलाली तथा कंचनपुर पूनः नेपालमा फिर्ता गरिएको थियो । अंग्रेजसँगको निकट सम्बन्धका कारण जंगबहादुर यी भूभाग नेपाल फर्काउन सफल भएका हुन् । बालनरसिंह कुँवरका छोराका रूपमा जंगबहादुरको जन्म वि।सं। १८७४ मा भएको थियो । सुरूका दिनमा लफङ्गा, जुवाडे जंगबहादुर आफूभित्रको अदम्य साहस, वीरता र चातुर्यका कारण नेपालको इतिहासमा एक सफल खलनायकका रूपमा छन् । नेपालमा राणा शासनको स्थापना गरी १०४ वर्षे पारिवरिक शासनशैलीको सुत्रपात उनीबाटै भयो ।
बेलायतीहरूका कट्टर भक्त जंगबहादुरले आफ्ना कट्टर विरोधीहरूलाई एकएक गरी मारेर एकतन्त्री शासन चलाए । उनी बेलायत र फ्रान्सबाट फर्केपछि नेपाली कला, संस्कृति, जनजीवन र कानूनमा समेत पश्चिमी प्रभवा परेको थियो ।वि।स। १९०३ देखि २००७ साल सम्म नेपालमा राणाहरूले शासन गरे । तत्कालिन राजपरिवार भित्रको किचलोको फाइदा उठाउँदै जङ्गबहादुर कुँवर पहिलो राणा प्रधानमन्त्री बने । वि।स। १९०३ असोज ३ मा काठमाण्डौको दरबार क्षेत्रमा भएको कुख्यात कोत पर्वमा सयौं भारदार, रइस र सैनिकको हत्या गर्ने उनको षडयन्त्र सफल भयो ।
त्यसपछि ऊनले आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राणा पद धारण गरे । राणा परिवारमा प्रधानमन्त्रीको पद वंशपरम्परागत बन्यो भने शाह राजाहरू नाम मात्रको भए । वि।सं। १९३३ मा पत्थरघट्टामा यिनको मृत्यु भयो ।जंगबहादुर आफ्नो जीवन भर विभिन्न कारणले चर्चामा रहे । समय वित्दै जाँदा उनी एक किंबदन्ती जस्तै बन्न थाले । धरहराको टुप्पोबाट हाम फाल्थे रे, हात्तिले कुल्चाउँदा समेत मरेनन् रे, ‘ज्यूँदै बाघ समात्थे रे’ भन्ने जस्ता उनीसँग जोडिएका यी कुराहरु अहिले पनि नेपाली समाजमा विद्यमान नै छन् ।
जंगबहादुर राणासँग जोडिएका १० चर्चित प्रसंगहरुः
१। जंगबहादुर घोडचढीका निकै सौखिन थिए । उनी पढ्नेतिर भन्दा बन्दुक, युद्ध, घोडचढी, खेलकुदमा बढि ध्यान दिने दिन्थे ।
२। उनी जहाँ जता जाँदा पनि घोडामै सवार हुन्थे । जहाँ पुगेपनि शिकार खेल्ने मूडमा हुन्थे । त्यसैले उनी गोला बारुद र बन्दुकको सम्पूर्ण बन्दोबस्त गरेर हिँड्थे । शिकारी मानसिकता भएकै कारण उनले बम्बईबाट ३० वटा अरब जातका घोडा मगाएका थिए ।
३। जंगबहादुर १८५३ मे २६ को गर्मीको दिन बद्रीनाथ दर्शन गरेर फर्कने क्रममा उनले सीमाना देखि काठमाडौंसम्म १ सय ९ माइल लामो यात्रा निरन्तर घोडामा गरेका थिए । उक्त यात्रामा १२ वटा घोडा बदलेका थिए ।
४। जंगबहादुरको पालामा देशमा करिब करिब तीन थरी शासन चलेको थियो । राजा, रानी र राजकुमारले तीनथरी शासन चलाउन थालेका थिए । त्यही कारण उनी देशको मुख्य शासन आफ्नो हातमा लिन सफल भए ।
५। एकदिन दरबारको जग्गा कमाउने किसानहरुले तुसारोको कारण बाली नष्ट भएकाले त्यस बर्षको तिरो र मालपोत मिनाहाको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा विवाद भयो । त्यसबेला उनी मन्त्रीपरिषद्को सदस्य थिए । प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा उचित कदम चाल्न नसकेपछि जंगबहादुरले त्यसको विरोध गरेका थिए । त्यसपछि मामा–भाञ्जा ९माथवरसिंह थापा र जंगबहादुर० बीच चर्को भनाभन चल्यो । जंगले भने–‘यो निर्णय एकदमै केटाकेटी भयो । मलाई केटाकेटी नठान्नुहोस् ।’ अनि यसमा राजा र राजकुमारले पनि जंगको पक्ष लिएपछि माथवरको मुख बन्द भयो ।
६। बेलायतको भ्रमण गर्ने एसियाकै पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् जंगबहादुर राणा । त्यसबेला अहिले जस्तो हवाईजहाजबाट सजिलै पुग्नसक्ने अवस्था थिएन । त्यसबेला उनी भारतको बाटो हुँदै गएका थिए । उनी बेलायत भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर एक वर्षसम्म त्यही बस्ने नेपाली प्रधानमन्त्री पनि थिए ।
७। जंगबहादुरको भ्रमणमा निस्केको टोलीले चिसापानीगढीको बाटो हुँदै पत्थरघट्टा पुगेको थियो । जहाँ उनीहरुको टोलीले १५ दिनसम्म बाघ र हात्तीको शिकार गरेर बसेको थियो ।
८। जंगबहादुर बेलायत जानेबेला पानी जहाजको प्रयोग गरेका थिए । समुन्द्री डाँकुबाट बच्न उनले तोपहरु जडान गरेका थिए । उनले भ्रमण टोलीमा कट्टर हिन्दूहरुलाई भान्से, पिपलको बिरुवा भएको गमला, ४० वटा पित्तलका गाग्रीहरु, दुहुनो गाई र महिनौंसम्मलाई पुग्ने दाल, चामलपनि साथै लगेका थिए ।
९। बेलायतमा पुगि नेपाली अलग्गै बसी खाना खान्थे । गाई दुहुन पनि अरुले पाउँदैनथे । यो दृश्य देखेर बेलायतीहरु अचम्म मान्थे । ४२ जनाको भ्रमण दल आफ्नो पोका–पन्तुरा बोकेर बेलायती होटलमा दौरा लगाएका जाँदा बेलायतीहरु रमिता मानेर हेर्थे ।
१०। जंगबहादुर नेपालबाट निस्किएको चार महिनापछि बेलायत पुगेका थिए । पछि उनी फर्कदाँ नेपाली कला, संस्कृति, जनजीवन र कानूनमा समेत पश्चिमी प्रभाव प्रशस्त बोकेर फर्किए ।
एक बेश्याका लागि जंगबहादुर राणाको एक रातको खर्च ३ करोडभन्दा बढि
सुन्दरी लाउरा वेलका लागि उतिबेला बेलायतका राजघराना देखि संभ्रान्त पुरुषहरु पैसा र शक्ति खन्याउन तयार हुन्थे । मोहनी लगाउने सुन्दरता, आकर्षक जिउडाल र सुमधुर आवाजले जो कोही लोभिन्थे ।सानदारसँग बग्गीमा आवतजाजव गर्ने लाउरालाई देख्नु र भेट्नु भनेको सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर थियो । तर, तिनै सुन्दरीसँग जंगबहादुर राणाले सम्भोग गरेका थिए ।लाउराको सुन्दरतामा पागल भएका जंगबहादुरले एक रातका लागि अढाई लाख पाउण्ड खर्च गरे । त्यो पनि आजभन्दा डेढ सय वर्ष अगाडि । आजको मितिमा यो रकम तीन करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी हुन आउँछ ।
जंगबहादुर लाउरासँग बेलायत यात्राका क्रममा ९० दिन निकट रहेका थिए । लण्डनमा जंगबहादुरको बेलायत यात्रा चर्चामा आउनुमा लाउरासँगको सम्बन्ध पनि कारण थियो ।लाउरालाई जंगबहादुरले बहुमूल्य उपहार दिएको विषय उठ्यो । लाउरालाई जंगले औंठी उपहार दिदै उनको आकांक्षा पूरा गरिदिने भनेका थिए ।जंगबहादुरको लाउरासँगको प्रेम सम्बन्ध अगष्ट सन् १८५० को ब्रिस्टल पत्रिकाले छापेको थियो । जंगबहादुरले बेलायत यात्रा पूरा गरेर फर्केलगत्तै जंग र लाउराको अफेयर चर्चामा आयो ।जंगबहादुरले ठूलो धनराशी दिएपनि लाउरा ऋणमा डुबेको विषय त्यतिबेलाका बेलायतका पत्रिकाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
सन् १८५१ मा सुन्दरी लाउरा ऋणमा डुबेको समाचार प्राथमिकताका साथ प्रकाशित भयो ।सन् १९४९ मा बेलायत यात्रामा निस्केका जंगबहादुर १९५२ मा फर्किएका थिए । लाउरासँगको सम्बन्धले उनलाई बेलायतमा अझै सम्झाउने शासकका रुपमा लिइन्छ । नेपाल बेलायत सम्बन्धमा जंगको नाम महत्वका साथ उठ्नेगर्छ ।